म्याड्रिडका राजदूतहरूलाई रिट्जमा UNWTO घुसखोरी ककटेलमा आमन्त्रित गरियो: को जाँदैछ?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड » म्याड्रिडका राजदूतहरूलाई रिट्जमा UNWTO घुसखोरी ककटेलमा आमन्त्रित गरियो: को जाँदैछ?
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • संस्कृति • सरकारी समाचार • होटल र रिसोर्टहरू • सभाहरूमा • समाचार • मान्छे • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा
यस हप्ता UNWTO महासचिवले स्पेनमा मान्यता प्राप्त सदस्य देशका राजदूतहरूलाई म्याड्रिड-द रिट्जको सबैभन्दा विशेष र महँगो होटलमा एक शानदार ककटेलको साथ मनोरञ्जन गर्नुहुनेछ।
UNWTO ले रात्रिभोज वा पेय पदार्थहरूमा राजदूतहरूलाई घूस दिन मन पराउँछ - र यसले देखाउँछ।
विश्व पर्यटन संगठनका वर्तमान महासचिव जुराब पोलोलिकासभिलीले यस हप्ता एक कदम चाल्ने छन्, द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार। eTurboNews स्रोतहरू।
जनवरीमा यो म्याड्रिडमा डिनर पनि थियो, त्यसैले यो नम्बर दुई हो।
जर्जिया वा UNWTO द्वारा प्रायोजित यस्तो कार्यक्रममा भाग लिन इच्छुक राजदूतहरू को हुन्, र स्पष्ट रूपमा Zurab को पुष्टि सुरक्षित गर्न डिजाइन गरिएको हो। Pololikashvilर दोस्रो महासभा कार्यकालको लागि
कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले राजदूतहरूले प्रश्नहरू सोध्ने छैनन् वा महासभामा गोप्य मतदानलाई समर्थन गर्ने छैनन्। आशा छ, अतिथि सूची लीक हुनेछ।
म्याड्रिड स्थान रिट्ज हो:
मन्डारिन ओरिएन्टल रिट्ज, म्याड्रिड एक लक्जरी बेले इपोक दरबार हो जुन प्रसिद्ध गोल्डेन ट्राइङ्गल अफ आर्ट अफ म्याड्रिडमा अवस्थित छ। 110 वर्ष भन्दा बढीको लागि, होटलले रोयल्टी, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, र विश्वभरका केही प्रतिष्ठित अतिथिहरूको मेजबानी गरेको छ। यो शानदार सम्पत्ति विलासिता र उत्कृष्टताको प्रतीक हो।
UNWTO महासभा अन्तिम मिनेटमा मोरक्कोबाट म्याड्रिडमा सरेकोले यो सभामा उपस्थित अधिकांश देशहरूको प्रतिनिधित्व म्याड्रिडमा रहेका राजदूतहरूले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो जुराबको लागि आफ्नो पुन: पुष्टि भोट सुरक्षित गर्नको लागि स्पष्ट र गणना गरिएको फाइदा हो। जुराब धेरै वर्ष म्याड्रिडमा रिपब्लिक अफ जर्जियाका लागि राजदूत थिए र कूटनीतिक समुदायमा उनको बाटो थाहा छ।
उनले पहिले नै पर्यटन मन्त्रीहरूको सहभागितालाई गाह्रो र महँगो बनाएका छन्। स्पेनमा दूतावास भएका ती देशहरूले सम्भवतः राजदूतहरू पठाउनेछन्, अन्य धेरै देशहरूले भाग लिने अपेक्षा गरिएको छैन।
पर्यटन मन्त्रीको सट्टा राजदूतलाई भोट दिने फाइदा
महासचिवबाट राजदूतहरूलाई विश्वस्त हुन धेरै सजिलो हुन्छ। जुराबले आफ्नो पुन: नियुक्ति सुरक्षित गर्न गोप्य मतदान अनुरोधबाट बच्न आवश्यक छ।
उसको पुन: पुष्टिको लागि उपस्थित सदस्य राष्ट्रहरूको 2/3 को बहुमत हुनु आवश्यक छ।
कति सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो योगदान तिर्न नसक्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सीबाट सार्थक सहयोगको लागि हताश भएकाले त्यस्ता असाधारण कार्यहरू गर्ने होलान्।
जुराब मनोरञ्जन गर्न मन पराउँछन्, र यसले सधैं उनको लागि काम गरेको छ।
कार्यकारी परिषद्ले म्याड्रिडमा उनको पुन: निर्वाचितको लागि मतदान गर्नु अघि र विश्व पर्यटन संगठनको शीर्ष-गोप्य कदममा, जनवरी २०२१ मा आधिकारिक UNWTO चुनाव कार्यक्रममा 34 देशहरूलाई घूस दिन डिजाइन गरिएको डिनर थपियो।
स्पेनिस सेलिब्रेटी शेफ ड्यानी गार्सियाले म्याड्रिडको फोर सिजन होटलमा रिश्वत डिनर तयार गर्नेछन् र जर्जियाका विदेश मन्त्रीले भाग लिनेछन्।
यसले जुराबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने एकमात्र उम्मेदवारलाई धेरै निराश बनायो र सबैतिर आँखा चिम्लियो। बहराइनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार रात्रिभोजमा सहभागी भएनन्।
2017 मा डिनरलाई म्याड्रिडमा जर्जियाली दूतावासद्वारा शिष्टाचार, बेचिएको फुटबल खेलमा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित गरेर बदलिएको थियो।
UNWTO ले डिनर, जर्जियामा ३४ देशलाई घूस दिने तयारी…
UNWTO महासचिवलाई आरोप लगाउनुले उनलाई न्यायाधीश बनाउँछ ...
UNWTO चुनावले भर्खरै मा रहेको कुनै पनि शिष्टतालाई मार्यो ...
बहराइन विरुद्ध UNWTO को अनादर JIU को उल्लङ्घन हो ...
जेफ्री लिपम्यानले UNWTO मा सभ्यताको लागि आह्वान गर्दछ ...
सधैजसो, eTurboNews UNWTO सँग पुष्टि गर्ने प्रयास गरे, तर कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएन। Bon Apetit!